एउटा चिनियाँ लेखन प्रणालीबाट अन्यमा चयन गरिएको चिनियाँ पाठलाई अनुवाद गर्दछ । यदि कुनै पाठ चयन गरिएको छैन भने, सम्पूर्ण कागजात अनुवादित हुन्छ । यदि तपाईँले एसियाली भाषा समर्थनलाई उपकरणहरू - विकल्प - भाषा सेटिङहरू - भाषाहरू मा सक्षम पार्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँले यो आदेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
परम्परागत चिनियाँ पाठ क्यारेक्टरहरूलाई सरलीकृत चिनियाँ पाठ क्यारेक्टरहरूमा अनुवाद गर्दछ । चयन गरिएको पाठ अनुवाद गर्न हुन्छ मा क्लिक गर्नुहोस् । यदि कुनै पाठ चयन गरिएको छैन भने पूरा कागजात अनुवादित हुन्छ ।
सरलीकृत चिनियाँ पाठ क्यारेक्टरहरूलाई परम्परागत चिनियाँ पाठ क्यारेक्टरहरूमा अनुवाद गर्दछ । चयन गरिएको पाठ अनुवाद गर्न हुन्छ मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि कुनै पाठ चयन गरिएको छैन भने पूरा कागजात अनुवादित हुन्छ ।
शब्दहरू दुइ वा बढी क्यारेक्टरहरूद्वारा अनुवाद गर्दछ जुन साझा पदहरूको सूचीमा हुन्छन्. सूची स्क्यान गरिएपछि, बाँकी पाठ एक एक क्यारेक्टरद्वारा अनुवादित हुन्छ.
टर्म सम्पादन गर्नुहोस्
Opens the शब्दकोश सम्पादन गर्नुहोस् संवाद जहाँ तपाईँले अनुबाद टर्महरूको सूची सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।
Title is: चिनियाँ अनुबाद